By Newsroom	 On Oct 24, 2020
Raysul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble oo maanta hortay Golaha Shacabka BFS ayaa u gudbiyay qorshe howleedka xukuumaddiisa iyo ansixinta golaha uu magacaabay 19-kii bishaan.
Fadhiga oo ay ku sugnaayeen Xildhibaanno gaaraya 188-mudane, waxa ay ugu horeyn dhageysteen hadal jeedinta Wasiirka Koowaad ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Raysul Wasaare Rooble ayaa sheegay in barnaamijka Xukuumaddiisa uu wax ka qabanayo dhinacyada Amniga, Doorashada, Xuquuqda Aadanaha, Musuqa, faafitaanka Xannuunka Covid-19 iyo qodobo kale oo laf-dhabar u ah howlaha shaqo ee Xukuumadda Soomaaliya.
Golaha Shacabka ayuu u sheegay in magacaabista Xukuumadda uu ka eegay dhinacyo kala duwan, sidaas awgeed uu shaqsiyaadka katirsan shaxdiisa uu ugu xushay la shaqeynta muddo xileedka u harsan.
“Wasiirada Xukuumadeyda waxa aan usoo xushay in ay yihiin dad waayo-arag ah oo ka gudbi kara marxaladda dalka uu ku jiro, sidaas awgeed waxa aan diiradda saari doonaa howlo ay kamid yihiin Amniga, Doorashada, marxaladda kala guurka & dhibaatooyinka ka dhanka ah Dumarka iyo carruurta” Ayuu yiri RW Rooble.
Wada-shaqeynta Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah DFS ayuu tilmaamay in ahmiyadda ugu weyn ee lagu wajahayo Doorashada Dalka ee 20/21 oo marlaxado kala duwan loosoo maray heshiis ka gaaristeeda.
Hadal jeedintiisa kadib waxaa loo gudbay u codeynta Xildhibaannada ogol, kuwa diidan & kuwa ka aamusan si xukuumadda haddii ay kalsoonida hesho u shaqo gasho, haddii loo diidanaya dib ugu laabto magacaabista.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa cod geliyay kalsooni siinta Xukuumadda & qorshe siyaasadeedkeeda oo ugu dambeyn uu ku dhawaaqay natiijada kasoo baxday codka gacanta taagga ah.
“Mudanayaal waxaa Wasiirada cusub & qorshe howleedkeeda u codeeyay 188-Xildhibaan, ma jiro Xildhibaan diiday ama ka aamusay, sidaas ayay ansax ku tahay Xukuumadda cusub ee Soomaaliya” ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka BFS Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
These Meals Drive the Most Weight Loss for Ladies, Says New Research
The tolerance threshold for resilience